Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hawaii any Afrika: Ahoana ny fankalazan'ny Sierra Leone ny Andro maneran-tany momba ny fizahantany
Fotoana fety any Sierra Leone izao. Misy miantso an'i Sierra Leone, ny Hawaii an'i Afrika Andrefana. Ravel sy fizahan-tany no lohalaharana amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny maro eto amin'ity firenena ity.
Ny Minisitry ny fizahantany sy ny kolontsaina an'i Sierra Leone, Dr. Memunatu Pratt, dia nanomboka ny fankalazana nanamarihana ny Andro maneran-tany fizahan-tany 2019.
Dr. Memunatu Pratt dia niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny famoronana asa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny andraikitry ny sehatra tsy miankina. Nanangana fampirantiana fampirantiana ireo zava-kanto sy asa tanana any Sierra Leonean izy tao amin'ny efitranon'ny Miatta Conference Hall.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny lapan'ny minisiteran'ny làlambe King Harman, dia nanamafy ny minisitra fa sambany nankalazain'i Sierra Leone ny Andro maneran-tany fizahan-tany tamin'ny fomba be pitsiny.
Amin'ny Andro maneran-tany fizahan-tany, faha-27 septambra 2019, ny Grand Float Parade dia atao ao Freetown manomboka amin'ny Cotton Tree mankamin'ny tranobe Youyi.
Ny filoha lefitra, Dr. Mohamed Juldeh Jalloh dia antenaina hiteny amin'ny fivoriana.
Lohahevitra amin'ity taona ity: Fizahan-tany sy asa: ho avy tsara ho an'ny rehetra angamba no tena mety raha ny làlan'ny minisitera ankehitriny no jerena.
Ny minisitry ny fizahantany sy ny kolontsaina, Dr. Memunatu Pratt dia mahafantatra fa ny famoronana sy ny fiantohana ny asa ara-drariny dia tena ilaina amin'ny fampitomboana ny fampidirana ara-tsosialy, fandriam-pahalemana ary filaminana.
Tafiditra ao anatin'ny fankalazana, natomboka ny fanontana Maiden an'ny Gazety Monument and Relics Commission.
Filohan'ny Komisiona, Charlie Haffner nilaza fa ny vakoka ara-kolontsaina no fototry ny fizahantany.
Ny filohan'ny Birao nasionalista mpizahatany dia hentitra tokoa rehefa niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fizahantany sy ny filàna mifantoka amin'ny fampandrosoana ny sehatra.
Ny Sehatra tsy miankina dia mankalaza ihany koa ny andro amin'ny alàlan'ny fanofanana ny manampahefana ao amin'ny indostria.
Fitsidihana an-tanana ny tanàna ihany koa dia kasaina hatao ny asabotsy 28 septambra 2019.
Ny fankalazana dia miseho amin'ny fotoana anaovan'ny Governemanta ezaka lehibe indrindra hanarenana ireo fotodrafitrasa fizahan-tany any Sierra Leone.
Ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany dia ankalazaina isan-taona amin'ny 27 septambra mba hampiroborobo ny fahatsiarovan-tena eo amin'ny fiarahamonina manerantany momba ny lanja ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ara-politika ary ara-toekarena ary ny anjara biriky azon'ity sehatra ity hahatrarana ireo tanjona kendrena maharitra.
Nosoratan'i Mohamed Faray Kargbo